एई ग्लोबल पोखराको ‘नम्बर वान’ एजुकेशन कन्सल्टेन्सी बन्दैछ : प्रीया थापा – Arthik Awaj
एई ग्लोबल पोखराको ‘नम्बर वान’ एजुकेशन कन्सल्टेन्सी बन्दैछ : प्रीया थापा
By आर्थिक आवाज २०७५ श्रावण २ गते बुधबार ०७:४५ मा प्रकाशित
सयौं एजुकेशन कन्सल्टेन्सीहरुको भिडमा ‘एईं ग्लोबल प्रालि’ले पोखरा शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । शाखा सञ्चालनको पाँच महिनाकै अवधिमा एई ग्लोबलले पोखरामा आफूलाई स्थापित गराइसकेको छ । लामो समय अष्ट्रेलिया बसेर स्वेदश फर्किएकी प्रीया थापा प्रालिको प्रवन्ध निर्देशक छन् । अष्ट्रेलियामा हासिल गरेको ज्ञान र सिप तथा अनुभव अहिले उनले विद्यार्थी माझ बाँड्दै परामर्श सेवामा आफूलाई तल्लीन बनाइरहेकी छन् । उनै प्रीया थापासँग एई ग्लोबलका सेवा, अष्ट्रेलियाको उच्च शिक्षा, परामर्श सेवा व्यवसाय लगायत विविधि विषयमा केन्द्रित रहेर आर्थिक आवाजले गरेको कुराकानीको सार :
एई ग्लोबलको पोखरा शाखा सञ्चालन गर्नुको उद्देश्य के हो ?
एई ग्लोबल प्रशिद्ध परामर्श दातृसंस्था हो । राजधानी काठमाडौंसहित देशका विभिन्न शहर र विभिन्न देशबाट परामर्श सेवा प्रदान गरिरहेको एईं ग्लोबल स्थापनाको १२ वर्ष पुगेको छ । यस अवधिमा हामीले नेपाली विद्यार्थी तथा अभिभावकको मन र विश्वास जित्न सफल भएका छौं । शाखा स्थापना गरी पोखरा सहित गण्डकी प्रदेशका विद्यार्थीलाई सेवा पु¥याउने लक्ष्यसहित शाखा सञ्चालनमा ल्याएका हौं । पोखरामा गत जनवरीबाट एई ग्लोबलको शाखा सञ्चालनमा आएको हो । छोटो अवधिमा हामी स्थापित भइसकेका छौं ।
एई ग्लोबलका शाखाहरु कहाँ–कहाँ छन् ?
एई ग्लोबलको मुख्य कार्यालय काठमाडौंमा छ । पोखरा र काठमाडौं बाहेक नेपालको इटहरी, चितवन, बुटवल, नेपालगञ्जमा शाखा छन् । अष्ट्रेलियाको सिड्नी र व्रिजमेनसहित भारत, भुटानमा एई ग्लोबलका शाखा सञ्जालहरु छन् । फिलिपिन्स र म्यानमारमा शाखा खुल्ने क्रममा छ । सन् २००७ बाट सेवा सुरु गरेको एई ग्लोबलले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा १२ वर्षे अनुभव हाँसिल गरिसकेको छ ।
कुन–कुन देशका लागि काम गर्नुहुन्छ ?
हामीले अष्ट्रेलिया र न्युजिल्याण्डका लागि पोखराबाट काम गरिरहेका छौं । अष्ट्रेलिया र न्युजिल्याण्ड जाने विद्यार्थीको पहिलो रोजाईमा एई ग्लोबल पर्नेमा हामी विश्वस्त छौं । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि धेरै विद्यार्थीको पहिलो रोजाई अष्ट्रेलिया र त्यसपछि न्युजिल्याण्ड पर्ने गरेको छ ।
पोखरामा धेरैं एजुकेशन कन्सल्टेन्सी छन्, अरु भन्दा एई ग्लोबल कसरी फरक छ ?
हाम्रो र अरुको तुलना गर्नै मिल्दैन । हामी अरु कन्सल्टेन्सी भन्दा धेरै कुरामा फरक छौं । फरक विशेषताकै कारण छिट्टै पोखराको नम्बर वान एजुकेशन कन्सल्टेन्सी बन्नेमा हामी ढुक्क छौं । हामीसँग लामो अनुभव छ । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको डकुमेन्टेसन र प्रोसेसिङ हामीले निःशुल्क गर्छौं । आयल्स कक्षा हामीले शाखा शुभारम्भका अवसरमा ३ महिनासम्म निःशुल्क ग¥यौं । अब पनि ५० प्रतिशत छुटमा कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छौं । हामी विद्यार्थीलाई सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउन कुनै कन्जुस्याइँ गर्दैनौं । म आफै पनि अष्ट्रेलियामा बसेर आएकाले त्यहाँको बास्तविक शैक्षिक अवस्थाका बारेमा ज्ञान छ, जुन ज्ञान म विद्यार्थीमाझ बाँड्न सफल छु । अष्ट्रेलियाका बारेमा पुरा ज्ञान नै नभई पोखरामा धेरैले कन्सल्टेन्सी चलाइरहेको पाइन्छ । हामी त्यहाँको शिक्षा प्रणाली तथा नीति नियमका बारेमा सधैं अपडेट हुन्छौं । ६÷६ महिनामा नीति परिवर्तन भइरहन्छ, यहाँ धेरैलाई पत्तो नै हुँदैन । त्यहाँ हुने हरेक अपडेट हामीले यहाँ विद्यार्थीलाई जानकारी गराइरहन्छौं ।
कस्ता–कस्ता युनिभर्सिटी तथा कलेजको प्रतिनिधि भएर काम गर्नुभएको छ ?
अष्ट्रेलियाका ६० भन्दा बढी युनिभर्सिटी तथा कलेजको प्रतिनिधि भएर काम गर्न हामी सफल छौं । अष्ट्रेलियाका सबै शहरलाई हामीले समेटेका छौं । त्यहाँका उत्कृष्ट युनिभर्सिटी तथा कलेजले हामीसँग समन्वय गरिरहेका छन् । विद्यार्थीले आफूले रोजेको युनिभर्सिटी तथा कलेज रोज्न पाउँछन् । आफ्नो चाहना अनुसारको प्रोग्राम तथा विषय विद्यार्थी त्यहाँ गएर अध्ययन गर्न सक्छन् । न्युजिल्याण्डका लागि पनि त्यहाँका उत्कृष्ट कलेज र युनिभर्सिटी हामीसँग आबद्ध छन् । अधिकांश कन्सल्टेन्सीहरु १÷२ वटा कलेज तथा युनिभर्सिटीको मात्र प्रतिनिधि भएर काम गरिरहेको अवस्थामा हामी पोखरामा अरु भन्दा फरक भएर प्रस्तुत भएका छौं ।
अष्ट्रेलिया विद्यार्थीको पहिलो रोजाई बन्नुको कारण के हो ?
अष्ट्रेलियाको जीवनशैली राम्रो छ । हावापानी नेपाल सुहाउँदो छ । विद्यार्थीको पहिलो प्राथमिकता भनेको अध्ययन नै हो । अध्ययनका लागि अष्ट्रेलियाका युनिभर्सिटी तथा कलेजहरु उत्कृष्ट छन् । रोजगारीका अवसर प्रशस्त छन् भने पिआर लिने प्रक्रिया पनि सजिलो छ । अध्ययन पछि संसारको जुनसुकै ठाउँमा गएर राम्रो काम पाउन सकिन्छ । अष्ट्रेलियामा अध्ययन पश्चात नेपाल फर्किएर राम्रो काम गरेका उदाहरण पनि प्रशस्त छन् । उज्ज्वल भविश्यको सपना बोकेर नै धेरै विद्यार्थी अष्ट्रेलिया जाने गरेको मैले अनुभव गरेकी छु ।
एई ग्लोबलका लक्षित विद्यार्थी कुन–कुन हुन् ?
प्लस टु र ब्याचलर्स उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई हामीले लक्षित गरेका छौं । पोखरा सहित गण्डकी प्रदेशका जिल्लाका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी पोखराबाट सेवा प्रदान गरिरहेका छौं । जुन विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया जान सक्छन् उनीहरुलाई हामीले निःशुल्क प्रोसेसिङ सुरु गर्छौं । जान नसक्ने विद्यार्थीलाई सम्भावना न्युन छ भनेर अन्य विकल्पमा लाग्न सुझाव दिन्छौं । जे यथार्थ हो त्यही हामी विद्यार्थीलाई भन्छौं ।
धेरै कन्सल्टेन्सीबीच हुने प्रतिस्पर्धालाई कसरी लिनुहुन्छ ?
पोखरामा धेरैं कन्सल्टेन्सी रहेको कुरा साँचो हो । तर पोखराको कन्सल्टेन्सी मार्केट हावामा उड्ने खालको रहेको मैले महसुस गरेकी छु । धेरैलाई नराम्रो लाग्ला, तर साँचो यो हो कि यहाँ धेरै कन्सल्टेन्सीहरु पुरा ज्ञान विना नै सञ्चालनमा छन् । हामी कसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि पोखरा आएकै होइनौं, हाम्रो एक मात्र लक्ष्य हो पोखरा तथा गण्डकी प्रदेशको नम्बर वान कन्सल्टेन्सी बन्ने । हामी यो यात्रामा अगाडि बढिसकेका छाँैं । शाखा सञ्चालनको ५ महिनामा पाएको सफलताले पनि नम्बर वान बन्न हामीलाई कसैले रोक्न सक्दैन भन्ने पुष्टि भइसकेको छ ।
प्रीया थापा, प्रवन्ध निर्देशक, एई ग्लोबल प्रालि, महेन्द्रपुल, पोखरा
एई ग्लोबलमार्फत अष्ट्रेलिया पुगेका विद्यार्थीलाई त्यहाँ कसरी सहयोग गर्नुहुन्छ ?
विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश पठाउनु मात्र हाम्रो लक्ष्य होइन । जानुभन्दा अगाडि जसरी हामीले विद्यार्थीको केयर गर्छौ, त्यसरी नै त्यहाँ पुगेपछि पनि सेवामा कमी हुँन दिँदैनौं । एयरपोर्टमा पिकअपदेखि सेटल हुन आवश्यक सहयोग हामी गर्छौं । पारिवारिक वातावरणमा विद्यार्थीको सेवा गर्नु हाम्रो विशेषता नै हो ।
अष्ट्रेलियामा प्रशस्त अवसर हुँदाहुँदै नेपाल किन आउनुभयो ?
नेपालको अरु देशसँग तुलना गर्नै सकिँदैन । मैले अष्ट्रेलियामा धेरै अवसर पाउछु र अहिले पनि पाइरहेकी छु । यद्यपि नेपालमै केही गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सोच हो । महिलाहरुलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि पनि नेपालमा केही भूमिका खेल्नसक्छु की भन्ने मैले सोचेको छु । विदेश अध्ययन गर्न र केही सिक्नका लागि जाने हो । तर, सिकेको ज्ञान र सिपलाई आफ्नै मुलुकमा आएर प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो हो । म विद्यार्थीलाई पनि त्यही सिकाइरहेको हुन्छु ।
पोखरामा हामी स्थापनाको छोटो समय भएपनि नेपालमा परामर्श सेवा सुरु गरेको लामो समय भइसकेको छ । लामो समयको अनुभव हामीसँग छ । एक पटक एई ग्लोबलमा आएर परामर्श लिनका लागि विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुलाई म आग्रह गर्दछु । हामीसँग दक्ष तथा अनुभवी काउन्सिलरहरु हुनुहुन्छ । हामीले पोखरामा शाखा स्थापना भएपछि विदेश गएका विद्यार्थीबाट पनि राम्रो प्रतिक्रिया पाइरहेका छौं ।